JOKER 2 YINTONI OMELE UYAZI? YONKE INTO MALUNGA NEMOVIE EZIZAYO KUNYE NENQWELOMOYA, KUNYE NOHLAZIYO OLUHLAZIYIWEYO - IIMUVI
UJoker yenye yezona bhanyabhanya ziphumeleleyo apho abantu bengonwabanga nje kuphela kodwa bancoma umlinganiswa onamandla
UJoker yenye yezona bhanyabhanya ziphumeleleyo apho abantu bengonwabanga nje kuphela kodwa bancoma umlinganiswa onamandla kaJoker (Joaquin Phoenix) oboniswe kwifilimu.
Emva kokubetha ngenxalenye yayo yokuqala, imovie ibuyile ngokulandelelana ukuze isonwabise kwakhona ngebali layo elomeleleyo kunye nabalinganiswa. Funda eli nqaku ukwazi yonke into malunga nokulandelelana.
Joker 2 Umhla wokukhutshwa: Ikhutshwa nini?
UJoker 2 usekwisigaba sokucwangcisa ngoko ke asinakulindela ukukhulula Ekupheleni konyaka ka-2021 mhlawumbi lixesha elifanelekileyo lokulindela ukulandelelana.
Joker 2 Cast: Ngoobani bonke abakwi-cast?
Abenzi qinisekisa imovie , kwaye azikho ezinye iinkcukacha ezikhutshiweyo okwangoku kunzima ukuqagela i-Joker 2.
Sonke siyithandile indlela uJoaquin Phoenix aphume ngayo nendima kaJoker. IPhoenix yade yonyulwa kwii-Oscars ngokusebenza kwayo okumangalisayo. Emva kokudumisa uWarner Bros ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuba yonke le ngqwalaselo ibuye kwaye uJoaquin Phoenix kufuneka abe kumakhadi kaJoker 2.
Kwaye ngoku xa umdlali weqonga othandwayo nguRobert Pattinson edlala indawo kaBatman kumdlalo bhanyabhanya weDC ozayo. Abathandi banethemba lokubona ubuso ngobuso phakathi kwezona zimbangi zibalaseleyo zexesha lonke-i-psychopath Joker VS ubuso bukaGotham, uBatman.
Nangona kunjalo, ezi ziingcamango zabalandeli zendlela elandelayo yeJoker.
Sinokulindela ukuba uZazie Beetz abuye njengommelwane kaJoker uSophie.
Emva kwayo yonke loo nto, uPhillips uqinisekisile ukuba uJoker akazange ambulale. Kodwa ukuba ubalekile ngokuqinisekileyo akabuyeli kwisakhiwo apho wonke umntu eza kumqonda ngokulula. Umbuzo ke ngulo… wabaleka phi kwaye njani uSophie?
Isiza seJoker 2: Kuza kwenzeka ntoni ngeli xesha?
Ewe, sonke siyazi ukuba akukho ngcebiso okanye ngxelo abenzi beJoker 2 , kunye nokuqashisela ngesiqwenga sefilimu efana noJoker ngumsebenzi onzima ngokwenene. Kuya kufuneka wenze uqikelelo olufanelekileyo ukuba ujongene neJoker. Ke, okwangoku, silindele ukuba imovie isombulule zonke iziphelo ezibi ezishiye kwinxalenye yokuqala yefilimu.
Zininzi iindlela ezingaphendulwanga ezivela kumdlalo bhanyabhanya wokuqala.
Ekupheleni komdlalo bhanyabhanya, uJoker ubonwa kwisibhedlele sabagula ngengqondo, emva koko abalandeli baya kubona amanyathelo anegazi kwaye egxalathelana ejikeleza epasejini.
Indawo yokugqibela yomdlalo bhanyabhanya ihlala itolikwa njengokulandelelana kwamaphupha, ebonisa ukukhula kwempilo yengqondo kaJoker.
Ngaba uza kubaleka esibhedlele kwimovie elandelayo, okanye iya kusetwa kumgca wexesha owahlukileyo? Lixesha kuphela eliza kuxela. Ukuza kuthi ga ngoku uhlale ekhaya kwaye ukhuseleke.
matt damon iifilimu eziphezulu
Umdlalo obalaseleyo we-Xbox 360